RIBBED EUPHORBIA (SHANLOOYINKA, SHANLAHA IYO FEERAHA) - SUUNKA SUNTA AH: SHARAX, SAWIR IYO DARYEEL GURIGA - SOOSAARKA DALAGGA
Muuqaal jilicsan - xajmiga (fuudka)
Xaqiiqdii, muddo dheer "jir" oo leh ciriiriga oo si ballaaran u faafaya caleemaha pedunculate ee kor ku xusan waxay u egtahay sidii silsilad geedo timir ah, laakiin isbarbardhigga waa mid dibedda ah.
Euphorbia ribbed, ayaa sidoo kale loo yaqaan shanlo ama shanlo, ayaa iska leh qoyska qoyska ee dhirta oo leh soodhad caano ah oo sumaysan - Euphórbia, Euphorbia.
Dalka hooyo ee euphorbia waa rujin iyo xayawaan xeebeed xeebta jasiiradda Madagascar, halkaas oo ay ku koraan carrada bacaadka ah.
Xaglaha cagaaran ee cagaaran ee cagaaran oo leh caarado cufan, sida caadiga ah oo aan laamiyooyin, ayaa lagu daraa farabadan oo ah ballaaran, midab leh, cagaaran, caleemo dhalaalaya leh caarad casaan ah.
Subaxda caleemaha waa mid aad u iftiimaya; waxay u adeegtaa sidii qaab-celiye, oo weliba waxay iftiimisaa caleenta qorraxda.
Qeybaha hoose, qaybaha barafka ee asliga ah, wejiyayaashu way wada siman yihiin oo weynaayaan.
Xilliga xagaaga, bilawga laga bilaabo sannadka ugu horreeya ee nolosha, blooms geedka, sameynta llorescences ee ubaxyo dhowr ah - mid kasta oo leh laba caddaan ama casaan "petals" -practices.
Noocyada Euphorbia waxaa loola jeedaa noocyada aan qabyada lahayn, oo sahlan aqalka. Noocyada noocan oo kale ah ayaa sidoo kale caan ku ah beerashada: Multifloric, Edged, Cypress, Tirukalli, Pallas, Mil, Belozhilkovy, Trihedral.
Marka xigta, waxaad arki kartaa xuubka (tikidhada):
Si aad u hesho daryeel wanaagsan ee guriga loogu talagalay wiishka euphorbia (shanlada) waa inaad raacdaa shuruudaha soo socda:
Dareemo badan sawir qaade, hase yeeshee cadceedu aad u kacsan tahay oo sii dheeraynaysa waxtarkeeda kuma dhicin: geedka ayaa gubay caleemaha, daboolka ilaalinta laga bilaabo dhar jilicsan.
Si aad u ilaaliso muuqaalka quruxda badan ee euphorbia, waa inaad ku dhejisaa bari ama galbeed.
Dhinaca koonfureed waxaad u baahan doontaa qasab shoogga, iyo daaqadaha waddooyinka waqooyiga iftiin iftiin ah.
Haddii aad ku jirto naas-nuujiyo fareemo leh xaalado hooseeya, salka ayaa la soo saaraa, caleemuhu waxay noqdaan kuwo aad u yar, guud ahaanna waa la dhimayaa.
Wixii ah hooyo ka mid ah tropics iyo subtropics heerkulka heerkulka wanaagsan heerarka xagaaga 20-25 digrii, jiilaalka - ku saabsan 16 darajo.
Hoos udhaca noocan oo kale ah waxay xaqiijin doontaa kobaca gaaban iyo isbeddel aan la jiidin doonin xaaladaha iftiinka jiilaalka hooseeya.
Summer waa mid aad u faa'iido leh si loo dhirta geedka ilaa balakoonka, siinta ilaalinta qorraxda qorraxda badan iyo dabaysha xooggan ...
In ay degaannada ah ee erythmya isku dhafan caadi carrada ciidda, aan sidoo kale cufan leh nafaqooyinka, - iyo dhaqanka qolka isaga oo ku habboon ciidda loogu talagalay cacti iyo succulents: dabacsan, wax yar acidic, nafaqo dhexdhexaad ah.
Waxa kale oo aad isku dari kartaa tiro isku mid ah caleenta cagaarka ah, peat iyo cuf, ama diyaariso substrate oo leh laba qaybood oo ah humus, hal qayb oo ah dhul caleen ah, laba qaybood oo ciid ah, iyo qayb ka mid ah peat.
Wixii biqilka abuurka ee caano wata, isku dar ah ciidda khafiif ah waxaa loo diyaariyaa qadaro siman oo ah ciid iyo peat peat.
Marka la beero caano-cufan, waa in daryeel la qaadaa si loo hubiyo in biyaha laga soo daayo biyaha, waayo khatarta ugu weyn ee Madagascar waa xayawaanka ciidda qoyaankataasoo keentay ciribtirka nidaamka asaasiga ah iyo nidaamka xididka.
Qeybta hoose ee weelka beerto waa in la dhigaa lakabka dheecaanka - dhoobo dhoobo ama dhagax yar yar.
Waxaad sidoo kale ku dari kartaa qaybo dhuxul ah.
Marka laga beerto euphorbia, dareen gaar ah ayaa la siiyaa nidaamka asaasiga ah: waa in aan la waxyeeleynin oo aad u sarreeya.
Sidaa darteed, ciidda hore ee xididdada sida ugu macquulsan ilaali iyo maalmaha ugu horreeya ka dib markii la beero geedka biyaha dhexdhexaad ahsida laga soo xigtay xilli ciyaareedka.
Waqtiga ugu wanaagsan ee ku-tallaalidda waa guga; Xilliyada isdhaafsiga - hal mar 2-3 sano.
Haddii aad soo iibsatey euphorbia oo ay ku jirto weelka maraakiibta, waa inay noqotaa, iyada oo aan dib loo dhigin, ku-tallaalid ku jira weel ku habboon, hubinta dheecaan wanaagsan oo ay ku jirto sida waafaqsan wakhtiga sanadka kaas oo ku-tallaalidda.
Guga iyo xagaaga biyaha warshad ahaan badanaahal ilaa laba jeer toddobaadkii, jilicsan, wanaagsan dejiyey biyaha heerkulka qolka.
Xilliga dayrta, waraabinta waa la yareeyey, iyo xilliga jiilaalka, heerkul yar oo la yareeyey, shanlo shanlayn leh ayaa loo isticmaalaa si looga hortago ciidda qalajinta: hal mar ama laba jeer bishii.
Haddii jiilaalka diiran yahay, biyo ayaa loo baahan yahay marar badan.
Fiiqan, sida wakiilka caadiga ah ee nooca, si fiican qaadaa hawo qalalanlaakiin isaga daaweynta biyaha ee faa'iido leh - Buufin aan caadi aheyn, oo ka dhigaysa boodhka caleenta caleenta iyo asliga ah, sidoo kale waxay abuurtaa caqabad ku saabsan weerarrada cayayaanka cayayaanku: badankoodu waxay si deg deg ah ugu degaan dusha sare ee dhirta.
Xilliga gu'ga-xagaaga ee koritaanka firfircoon, ayaa loo baahan yahay dabagalaha quudinta toddobaadlaha ah.
Waxaa ugu fiican in la isticmaalo hababka gaarka ah ee cacti iyo succulents.
Diyaargarow loogu talagalay dhirta indoorka ah ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa, laakiin, kahor quudinta dhirta, waxay u baahan yihiin inay si adag u noqdaan si loo jaro.
Waxyaalahan ayaa si fiican uga jawaabaya kor u kaca content potassium dharka ugu sareeya.
Dayrta, iyo gaar ahaan quudinta jiilaalka Looma baahna.
Xaalado gaar ah si loo barbar dhigo, xajiyo uma baahna iyo haddii ay tahay iftiin, diiran oo aan qoyanayn, waxay si fudud u bilaabi kartaa, laga bilaabo sanadka ugu horeeya ee nolosheeda, qaabab casaan ah oo casaan ah ama caddaan ah caddaan ah oo ah casaan ama casaan-cagaaran-cagaaran ee qaybta sare ee asliga ah.
Seeds way fududahay in la sameeyo; ka dib markii aad u dhaqday dhirta ayaa shahiiday iyaga oo ka soo qaada sanduuqyo qaanuuni ah oo dhan mitir ka fog.
Sidoo kale biqilka abuurka wanaagsan.
Ribbed Euphorbia waxay jili karaan gooynta iyo abuurka.
Iyada oo habkan loo dhalan karo, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso in noocyada noocyada caanaha loo yaqaan 'caanaha' loo yaqaan 'cufan', sidaas awgeed, haddii aad jarjartid qaybta sare ee warshadda waalidka ee jarista, lumiyo qurxinta.
Sababtan darteed, faafin by gooyn marar dhif ah ayaa loo isticmaalaa, xaaladaha gaarka ah - tusaale ahaan, haddii dhirta ay saameeyeen kallanaatka rootiga oo aad u baahan tahay si aad u badbaadiso sare u caafimaad leh.
Goynta waxaa ugu wanaagsan in lagu sameeyo bartamaha xagaaga, july.
Dusha sare waa la gooyaa, waxaa loo oggol yahay in la daadiyo juice caano, budada dhuxusha budada ah.
Boogta keentay waa la qalajiyey 2-3 maalmood ee hooska ah iyo beeray for rooting ee ciid qoyan qoyan ee halabuurka fudud: sand iyo peat in ay u dhigma u dhigma.
Cannabada caanaha loo yaqaan leedahay biqil aad u fiican iyo si qoto dheer u jilciya dhammaan dheriyada dhirta ee geedka.
Isku-tallowga noocaan ah wuxuu xitaa xaddidaa.
Wixii loola jeedo, la xakameynayo, beereed, miraha la gooyey, waxaa lagu dhajiyaa dusha ciidda oo daboolay muraayadda.
Caleemaha ayaa muuqda degdeg ah. Dhowaan dhirta yaryar waxaa lagu beeray karaa oo loo ilaalin karaa iyaga, sida haddii ay gebi ahaanba koray: biyaha, quudinta, culeyska dherar dhaadheer.
Xagaaga soo socda waxay gaari doonaan dhererkoodu 15 cm iyo markii ugu horeysay ee noloshooda ay barbar dhigaan.
The afkoda ayaa la soo baxay, caleemaha hoos u - iftiin ku filan.
Leaves dayrta iyo dayrta - qalajinta ciidda.
Caleemaha waxay noqdaan huruud iyo hurdo - waraabinta ama isbeddel deg deg ah heerkulka qoraallo.
Xaaladaha caadiga ah ee euphorbia, waxa ku jira dhirtaas Xanuun la'aan.
Qoyaan xad dhaaf ah waxay noqoneysaa sababta kalluumeysiga. Kareemka Rootka gaar ahaan Khatar ah.
Dhibaato xoog leh waa inay ahaato gooyaa qaybta caafimaadka leh, xidid iyo ku hay xaaladaha saxda ah, iyo Ka tirtir qaybta kale ee geedka.
Haddii ay jiraan wax yar oo nafaqo ah, meel bannaan iyo iftiin, iyo qoyaanka ayaa istaagaya, cawska xayrta maqaarka.
Geedka noocan oo kale ah waa mid gooni u ah lagu daaweeyo daawooyinka fungicidal, xal xal sulfate ah.
Mustaqbalka Kobcinta xaaladaha xabsiga.
On caleemaha dhirta daciifay ku noolaan kartaa aphid ama caarada caarada cas. Meelaha ay saameysay waa in si dhakhso ah loola dhaqmo.
Waad codsan kartaa xalinta saabuuntalaakiin daaweynta ugu fiican ee ka hortagga cayayaanka noocan ah waa cayayaanka waxqabadka nidaamka.
Qaybta hoose ee caanaha ayaa ku weerari karta xididka mealybug. Haddii taasi dhacdo, xididada waa la dhaqaaiyo dhulka lagu daaweeyo cayayaanka ee ciidda.
Euphorbia waxaa lagu magacaabaa Euphorbia adoo magaca dhakhtarka hore ee Evforba, kaas oo, sida halyeeyga, sida ugu horeysa ee loo isticmaalo cabitaankoodii casiirka sumaysan sida daawo: waxaa loo yaqaan tan Hippokrat: qiyaasta kaliya ayaa go'aamisa inay tahay sun ama daawo.
Caanaha shiidan caloosha waa sun, sida caanaha oo dhan.
Maqaarka waxa keena falcelinta xasaasiyadda iyo gubasho; Gelitaanka jidhka wuxuu keenaa gubasho ee xuubka xuubka iyo sumowga, wuxuu sababaa gubasho afka, lallabbo iyo matagid.
Sidaa darteed geedka laguma talin inaad koraan halkaas oo ay jiraan carruur yar iyo xayawaan guri.
Si kastaba ha ahaatee, juice isku mid ah, ama halkii, faleebo caleemaha jarjaran ee biyo karkaraya, waxay ka caawisaa in laga takhaluso dhibco da'da, ka qaad baaqulada qalalan iyo burooyinka, ku adkee dhaawacyada maqaarka fungal.
Xaaladdan oo kale, qiyaasta iyo waqtiga soo-qaadista waa inay noqotaa si adag u xaddidan. Decoction Milkweed loo isticmaalo cudurada caloosha iyo beerka. Diyaargarowga khamriga ee dufanka caanaha loo isticmaalo guryaha guriga.
Dareemka Spurge (shanlaha, dhirbaaxada) - Qubeyska ubaxa oo leh muuqaal "muuqaal", daryeelka guriga ma aha mid aad u adag, sidaas awgeed dhirta ayaa qurxin doonta gurigaaga sanado badan, iyadoo si habboon loo isticmaali karo iyo daryeelka xannaanada ayaa sidoo kale daroogada.
Sida loo abuuro iyo u koraan warshad ka mid ah Karasuba mukdeniya (Mukdenia rossii 'Karasuba')
Tamaandho kala duwan "King of Siberia": Ma jiraan wax khasaare ah?
Sida loo koro strawberries ka soo abuur ah: Tricks dalka
Labada dhaleen ee khibrad u leh digaaga iyo ninkii waddada ku jira ma caawin karo, laakiin haween Dutch ah ayaa ka soo gala dhammaan noocyada digaagga, oo indhaha u roonaanaya muuqaalkiisa aan caadiga ahayn iyo kufarxinta milkiilayaasha leh tiro qumman oo ukumo ah iyo awoodda ay u isticmaalaan digaagga iyaga oo matalaya hilibka hilibka. Noocyada ornamental ee digaagga waxaa badanaa lagu qurxiyo ujeedooyin qiiro leh: si ay u jecel yihiin. Read More
Kalkaaliyaha dhirta asalkoodu yahay sinus - casiir sooman